သပြေရိပ်လဖက်ရည်ဆိုင်နှင့်ကျနော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » သပြေရိပ်လဖက်ရည်ဆိုင်နှင့်ကျနော်
Posted by ကိုမောင် on Sep 12, 2011 in Complaint / Claim |0comments
ကျနော်တို့ ဂေးဇက်မိတ်ဆွေများနှင့်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသော ညီအကိုမောင်နှမများစိတ်ရှည်စွာဖြင့် ကျနော်ကိုယ်တွေအဖြစ်အပျက်လေးကိုဝိုင်စဉ်းစားပေးစေလိုပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းUMFCCI ရုံးအနီရှိသပြေရိပ်လဖက်ရည်ဆိုင်တွင်၁၁.၉.၂၀၁၁ရက်နေ့ညနေ၃း၃၀လောက်တွင်လဖက်ရည်သောက်ရင်းပစ္စည်းတခုမေ့ကျန်ခဲပါသည်၊ ၄င်းပစ္စည်းလေးသည်တရုတ်ရိုးရာအပ်စိုက်သလိုဝေဒနာ ခံစားရသောနေရာ
သို့တိုက်ထိတွေစေခြင်းဖြင့်သက်သာစေပါသည် ။ပုံစံမှာဘီးလိုအစွယ်လေးများပါသောအ၀ိုင်းပုံလေးပါ။ အမျိုးသမီးတွေမိတ်ကပ်ဘူးနှင့်လည်ခပ်စင်စင်ပုံလေးပါ။
ကျနော်တို. စားသောက်ပြီးငွေရှင်းပြီးသူငယ်ချင်းနှင့် နုတ်ဆက်ပြီးအပြန်တွင်မေ့ကျန်ခဲ့ပါသည်။ သတိဝင်သောအချိန်မှာ၎င်းဆိုင်မှအထစုစုပေါင်း၉မိနစ်ဝင်းကျင်
ပြန်လှည်ပြီးလာသောအခါတွင် စားပွဲးထိုးတွေက` ကျနော်တို့နှင်အပြိုင်ထသောဝိုင်ရှိကောင်းရှိပါလိမ်းမည်~ ကားအပြာနှင့်လူက သူငယ်ချင်းပစ္စည်းဘာညာပြောပြီးလက်ခံရယူသွဲာပါသည်။ ၄င်းလူသည်လဲသပြေရိပ်ကိုပုံမှန်လာနေသောလူလို စားပွဲထိုများကပြောကြပါသည်
ဒီနေကျနော်သွားပြီးမေးကြည်တော ၄င်းလူဒီနေမလာပါဘူးလိုပြောပါသည်။ ကျနော်အထင်တောဒီလူသည် ၄င်းပစ္စည်းကဈေးနှန်းကြီးတာကို သိလိုယူချင်းတာလား
တယ်ပဲစားပွဲထိုးတွေက အယုံလွယ်ပြီးပိုင်ရှင်မဟုတ်ပဲနှင့် ဘာကြေင်အပ်နှံသည်ကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေပါသည်။ ယခုကျနော်စဉ်းစားနေတာကတော့ဖြစ်စဉ်
အမှန်ကတောဘာကြောင့်ကောင်တာကိုမအပ်ပဲ အယုံလွယ်ပြောပြီးလက်ခံရယူလူကော~ စားပွဲထိုးရော ဖြစ်သင့်တာကိုမလုပ်ကြပဲ~ ~~/??????့ ကျနော်အတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းတာ လူတွေရိုးသားမှု့ တွေပျောက်ကုန်းတာအရမ်းနှမျောမိပါကြောင်း ။ညီအကိုမောင်နှမများသတိချပ်စေခြင်းပါသည်.
Myo Thein has written 15 post in this Website..
I amaone of the social helping to poor people affected by natural disaster hole country especially in medical field and food supply.
View all posts by ကိုမောင် →